Madaxweynaha Puntland oo Nairobi kula kulmay safiiro iyo diblumaasiyiin. – Radio Daljir
Madaxweynaha Puntland oo Nairobi kula kulmay safiiro iyo diblumaasiyiin.
Diseembar 9, 2016 8:43 g 0
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wefti uu hogaaminayo ayaa kulan kula qaatay magaalada Nairobi ee caasimada wadanka Kenya Safiirka Hindiya u fadhiya Soomaaliya iyo Madaxa bangiga aduunka.
Kulanka ay madaxweynaha iyo weftigiisu la qaateen safiirka Hindiya iyo Madaxa Bangiga aduunka ayaa waxa lagaga wada hadlay arimo laxiriira doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan kuwa puntland, abaarta baaxadaleh ee kajirta Puntland iyo mashaariicda horumarineed ee ay ka fuliyaan Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya.
Ugu horeyn Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa uga xog waramay Safiirka iyo madaxa Bangiga aduunka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ka socda Puntland, waxaana uu u sheegay madaxweynuhu inay marayaan meel wanaagsan, bilaw fiicana u yihiin mustaqbalka doorashooyinka Soomaaliya ee lahiigsanayo.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa safiirka iyo Madaxa bangiga aduunka siqoto dheer uga xog waramay abaaraha ka jira Puntland iyo gurmadka loo baahan yahay in loofidiyo dadka abaaruhu halakeeyeen, islamarkana waxa uu sheegay madaxweynuhu in Dawladda Puntland iyo shacabkeedu gacan weyn ka qateen taakulaynta dadka abaartu wax yeelaysay.
Ugu danbayn Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa illaahay u weydiiyey ummada soomaliyeed inuu ka saaro abaarta una shubo raxmadiisa.